नेपाल, काठमाडौं वा अनलाइनमा जापानी भाषा सिक्नुहोस्। HH JapaNeeds
जापानी ट्यूटोरिंग नेपाल, काठमाडौं, वा अनलाइन
अनलाइन जापानी शिक्षा
नि: शुल्क परीक्षण कक्षाको लागि साइन अप गर्नुहोस्
"इ-लर्निंग कोर्स" अहिलेको लागि नि: शुल्क छ!
नि: शुल्क साइन अप गर्नुहोस्
कम्प्युटर प्रोग्राम वा एक स्वचालित मिल्दो अनलाइन ट्यूटर्सको साथ जापानी सिक्न संघर्ष गर्दै ? थप छैन। तपाईं जापानी भाषा ट्यूटर्समा हाम्रो ह्यान्ड्सको साथ सिक्नुहुनेछ जसले तपाईंको भाषालाई एक अनलाइन पाठमा दर्जी गर्न सक्दछ! तपाइँको सिकाई भाषा एक अद्भुत यात्रा बनाउनुहोस्। हामी HH JapaNeeds हौं, एक अग्रणी भाषा अनलाइन स्कूल।
तपाइँको नजिक वा अनलाइन एक उत्तम जोडा मिलाउने शिक्षकबाट जापानी भाषा सिक्नुहोस्!
HH JapaNeeds को सुविधाहरू
केवल तपाईंको लागि उत्तम शिक्षक। तालिकाहरू र स्थानहरू धेरै लचिलो छन्।
ठूलो मूल्य निर्धारण
उत्तम मूल्य, वेबमा भुक्तान गर्न सजिलो भुक्तान विधि।
निःशुल्क परीक्षण पाठ लिनुहोस्। यदि तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने, हामी तपाईंलाई फिर्ता दिन्छौं।
स्थानीय वा अनलाइन पाठहरू
तपाईसंग आमनेसामने पाठ हुन सक्छ केवल तपाईको जापानमा मात्र होइन तर जापान बाहेक अरु विदेशी देशहरूमा पनि। कृपया अनुरोध गर्नुहोस् यदि तपाईंको क्षेत्रमा तपाईंको लागि जापानी शिक्षक छ भने।
चाहे तपाईं संसारमा कता बस्नुहुन्छ, तपाईं नजिकैको क्याफे, सार्वजनिक स्थान, घर वा कार्यालयमा जापानी ट्यूटरलाई भेट्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंको क्षेत्रमा कुनै शिक्षक छैन भने कृपया उपलब्ध नभएसम्म केही बेर पर्खनुहोस्, वा लिनुहोस् अनलाइन कक्षा।
हाम्रो ट्युटरहरू तपाईंलाई अनलाइन सिकाउनको लागि तयार छन्। विश्वलाई तपाईको कक्षा कोठा बनाउनुहोस्!
आदर्श जापानी ट्यूटरको बारेमा तपाईंलाई केहि प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।
हाम्रो संयोजकले एक हप्ताको बारेमा आदर्श शिक्षकलाई परामर्श र व्यवस्था गर्ने छ। नि: शुल्क परीक्षण पाठमा निश्चित हुनुहोस् कि शिक्षक उत्तम फिट छ।
नियमित पाठ सुरू गर्नुहोस्। उत्तम जोडा मिलाउने शिक्षकको साथ प्रत्येक जापानी पाठ तपाईलाई छिटो र सजिलो बढ्न मद्दतको लागि बनाईएको हो।
एच एच जपाइनीड्स जापानी भाषा स्कूल शिक्षक पाठले तपाईंलाई नेपाल, काठमाडौं वा अनलाईनमा तपाईंको लागि उत्कृष्ट जापानी भाषा पार्टनर र पेशेवर शिक्षक छनौट गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईं जापानी भाषा सिक्न चाहानुहुन्छ भने कृपया हामीलाई बिभिन्न आवश्यकताहरू जस्तै जापानी कुराकानी, व्याकरणको लागि यसलाई छोड्नुहोस्। नेपाल, काठमाडौं, वा अनलाइनमा एक पेशेवर जापानी भाषा शिक्षकको साथ एक JLPT कोर्स पनि उपलब्ध छ। हाम्रो दर्ता शिक्षक डाटाबेस दैनिक अपडेट हुन्छ। यदि तपाईं नेपाल, काठमाडौं वा अनलाईनमा वर्तमान संकाय सूचीबाट संकाय सदस्यको साथ बैठकको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्न भने। , तपाईं चाँडै नै एक साथ बैठकको व्यवस्था गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। यदि तपाईं अनलाइन शिक्षक चाहानुहुन्छ भने, तपाईं जहाँसुकै जान सक्नुहुन्छ। नेपाल, काठमाडौं, वा अनलाईनमा अनुकूलित वन-वन-पाठको लागि जापान निड्समा सम्पर्क गर्नुहोस्।
यदि तपाईं स्थानीय रूपमै जापानीको बारेमा सोध्न चाहानुहुन्छ भने कृपया यहाँ जानुहोस्।
Nepal Embassy of Japan
१२33, नारायण गोपाल सडक पानीपोखरी, वार्ड नम्बर Kath काठमाडौं (उत्तर), नेपाल (पो। बक्स २44) फोन: (777777-१)244२668080०
शिक्षक मैत्री, बिरामी, धेरै सहयोगी छन्, र तपाईं एक आरामदायक वातावरणमा भाषा सिक्न सक्नुहुन्छ। मेरो देश फर्किए पनि मेरो शिक्षा जारी छ। धन्यवाद!
मेरो पाठ्यक्रम एक उच्च योग्य शिक्षक द्वारा चलाइएको थियो, त्यसैले म जापानी भाषा सिक्नको लागि प्रेरणा थियो। मेरो काम धेरै व्यस्त भए पनि उनी मलाई प्रोत्साहित गर्छिन्।
समन्वयक पाठ समर्थन
कुनै पनि मुद्दाहरूको छलफल गर्नका लागि कुनै एक संयोजकलाई सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्।
लचिलो र सुरक्षित भुक्तान
विद्यार्थीहरूले केवल एक साधारण प्रक्रियामा HH JapaNeeds भुक्तान गर्छन्।
तपाईंको सम्भावितता हटाउनुहोस्
हामी आशा गर्दछौं कि तपाईले जापानी भाषा मात्र सिक्नु भन्दा धेरै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। जापानी अनलाइन अध्ययन गर्नु भनेको तपाईको भाषा कौशल सुधार गर्नु मात्र होईन। यो तपाइँको जीवन समृद्ध पार्ने बारे पनि हो। यदि तपाईंको जीवन धनी हुन्छ भने, हामी आशा गर्दछौं कि तपाईं ठूला चुनौतीहरू लिन र समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुहुनेछ। हामी एचएच जापानईड्स अनलाइनमा तपाईको मार्गनिर्देशक बन्न चाहन्छौं ढोका खोल्नको लागि उत्तम तपाई र अझ राम्रो संसारको लागि।
ट्यूटर्सले अनुकूलित सीखने योजनाहरू बनाउँदछन् र सुधारको आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूलाई पन्छाउन सँगै मिलेर काम गर्दछन्। तपाईं हीरागाना , काटाकाना, कांजी, निहोंगो , JLPT (जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा) N5, N4, N3, N2, N1 कोर्स अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंको घर, अफिस, क्याफे र अनलाईनमा हाम्रा शिक्षकहरूसँग शुरुवात गर्नेहरूको लागि कुराकानी। निःशुल्क वर्ग प्रयास गर्नुहोस्। किन तपाईं हाम्रो जापानी भाषा ट्युटरहरू मध्ये एक भेट्नुभएन र आफ्नो सम्भावनाहरू विस्तार गर्नुहुन्न? तपाईंको शिक्षक तिम्रो समय। तपाईंको स्थान। आज तपाईको जापानी भाषाको यात्रा सुरु गर्नुहोस्!…
कृपया सोच्नुहोस् कि जापानीज सिक्न धेरै गाह्रो छ तपाईंले प्रयास गर्नु अघि। जब हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई जापानीको उनीहरूको प्रारम्भिक प्रभावहरूको बारेमा सोध्यौं, उनीहरू मध्ये धेरैले जवाफ दिए, “यो सोचेभन्दा यो सजिलो छ।” तिनीहरूले यो पनि भने, “जापानी पढ्न गाह्रो छ, तर बोल्नको लागि यो अचम्मको कुरा हो।”
वास्तवमा, अन्य भाषाहरूको तुलनामा जापानी अनलाइन सिक्नु त्यति गाह्रो छैन। जापानी व्याकरण पश्चिमी भाषाहरू भन्दा सरल छ। उदाहरण को लागी, निम्न सुविधाहरु याद गर्नुहोस्:
नाउन्स सजिलो छ
त्यहाँ जेन्डरहरू (मर्दाना, स्त्रीलिंगी, न्युटर) वा लेखहरू छैनन् (निश्चित र अनिश्चितकालीन सर्वनाम) जस्तै अंग्रेजी र फ्रेन्चमा।
सजिलो क्रिया संयोजन
जापानी क्रियापदहरू अंग्रेजीमा वा फ्रान्सेलीमा यस विषयको आधारमा उनीहरूको फारम परिवर्तन हुँदैन।
उच्चारण गर्न सजिलो
पश्चिमी भाषाहरूमा त्यहाँ धेरै फरक स्वर र व्यञ्जन संयोजन छन्। जापानीज केही फोनमहरू सहित भाषाहरू उच्चारण गर्न सजिलो मध्ये एक हो।
जापानको धनी संस्कृतिले यो सुन्दर भाषा सिक्नको लागि धेरै प्रेरणा प्रदान गर्दछ। भाषा सिक्ने तपाईंको कारण जेसुकै होस्, तपाईंले जापानी भाषा पढ्ने समय धेरै स्तरहरूमा इनामदायी छ। सबैजनाको जापानी कक्षा अनलाइन लिनुको आफ्नै कारणहरू छन्, तर त्यहाँ धेरै सकारात्मक लाभहरू छन् जुन तपाईंले अहिलेसम्म महसुस गर्न सक्नुहुन्न। केहीलाई नाम दिन तपाईं जापान र यसको संस्कृतिको गहिरो समझ प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईं मित्रहरू पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। अन्तमा, तपाईले आत्मविश्वास पाउनुहुनेछ।
यदि तपाईं एक-बाट-एक जापानी अनलाइन पाठहरू खोज्दै हुनुहुन्छ भने, HH JapaNeeds को अनुहार, र अनलाइन शिक्षण सेवाको शिक्षण सेवा सुरू गर्नुहोस्। त्यहाँ एक निःशुल्क परीक्षण वर्ग छ र गुणवत्ता १००% ग्यारेन्टी छ।
पार्टनर वर्गहरू सस्ती र व्यावहारिक छन्। यी वर्गहरू तिनीहरूका लागि हुन् जो एक बजेटमा छन् र गुणस्तरीय पाठहरू चाहन्छन्। तपाईं हाम्रो नि: शुल्क ई-भाषा सीखने कोर्सबाट शुरू गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईं जापानीज भाषा सिक्ने बारेमा चिन्तित हुनुहुन्छ भने। यो जापानीमा रुचि राख्ने सबैलाई उपलब्ध छ। प्रोफेशनल क्लासहरू अनुभवी पेशेवर जापानी शिक्षकहरूले सिकाउँछन् र जो काम वा शैक्षिक कारणहरूको लागि छिटो जापानी सुधार गर्न वा परीक्षा पास गर्न चाहान्छन् उनीहरूको लागि आदर्श हो। कक्षा तपाईको घर, कार्यालय, अनलाइन, वा कुनै पनि अन्य समयमा र तपाइँको मनपर्ने ठाउँमा आयोजित गर्न सकिन्छ।
जापानी भाषा मास्टर गर्न उत्तम तरिका पत्ता लगाउनुहोस्। हाम्रो अनुकूलित भाषा सिक्ने मार्फत तपाईंको जापानी अधिकतम बनाउनुहोस्। तपाईंको भाषा सिक्ने सम्भावना हटाउनुहोस्। तपाईंको जापानी भाषाको सपनाहरू हामीसँग वास्तविक बनाउनुहोस्।
हाम्रो ट्युटरहरू मध्ये एक अनलाइनमा जापानीहरू एक-एक गर्दै अध्ययन गर्न यो एक अद्भुत अनुभव हो! शिक्षकले तपाईको सामर्थ्यहरू, कमजोरीहरू र तपाई हासिल गर्न चाहानु हुने लक्ष्यहरू बुझ्दछ। तिनीहरूले अनुकूलित सीखने योजनाहरू सिर्जना गर्नेछ र सुधारको आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूलाई पार गर्न तपाईंसँग मिलेर काम गर्दछन्। तपाईं हीरागाना, कटाकाना, कांजी, निहोंगो, जेएलपीटी (जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षा) N5, N4, N3, N2, N1 कोर्स अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ, र तपाईंको घर, कार्यालय, क्याफे, अनलाइन वा अन्य स्थानमा हाम्रा शिक्षकहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। निःशुल्क वर्ग प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं किन हाम्रो जापानी भाषा ट्युटरहरू मध्ये एक भेट्नुहुन्न र आज तपाईंको सम्भावनाहरू विस्तार गर्नुहुन्छ?
तपाईंको शिक्षक तिम्रो समय। तपाईंको स्थान। आज आफ्नो जापानी भाषा यात्रा सुरु गर्नुहोस्!
हामी तपाईंको अावेदनको लागि तत्पर छौं।
आज तपाईको भाषा यात्रा सुरु गर्नुहोस्!
Subtropical जंगलदेखि विश्वको हिमालयन छानासम्म, नेपाल विविध भूमिमा 30० भन्दा बढी जातीय समूहहरूको घर छ। पुरानो घर र मन्दिरहरूको सांस्कृतिक सम्पदा, प्रचुर मात्रामा प्रकृतिसहित एक राष्ट्रिय निकुञ्ज, र यस देशको विविध आकर्षणहरू। यो भारत र चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रको सिमानामा अवस्थित एक भूमिहीन देश हो। राजधानी काठमाडौं हो। एउटा बहु-जातीय देशमा जहाँ विभिन्न जातीय समूहहरू बसोबास गर्छन्, जातीय समूह र जातिहरू एक अर्कासँग जटिल छन्। आधिकारिक भाषा नेपाली हो, तर प्रत्येक जातीय समूहका भाषाहरू पनि प्रयोग हुन्छन्। हिन्दू धर्म मुख्य धर्म हो, तर बौद्ध र मुस्लिम पनि त्यहाँ बस्छन्। यो जापानका मानिसहरूलाई हिमालय आरोहणका लागि प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित देश हो, जुन विश्वमा सगरमाथाको उच्च शिखर हो। तपाई किन यस्तो जापानी नेपालको एच एच जापा नीड जापानी ट्यूटरको साथ अध्ययन गर्नुहुन्छ?